आफ्नै हातमा "Shambhala" कंगन
हरेक महिला सुन्दर सजावट रुचि। आजको पसलहरुमा तपाईं पोशाक आभूषण को एक विस्तृत श्रृंखला पाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले विशेष केहि गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक कंगन बुनाई गर्न सिक्नुपर्छ Shambhala आफ्नै हात। यो सजावट एकदम व्यावहारिक छ र बिदा र लागि उपयुक्त छ हप्तादिन। गरेको बुनाई को प्रविधी मा एक नजिक हेरौं।
• waxed कर्ड -3मिटर;
• धातु मनका -4टुक्रा;
• faceted मोती पारदर्शी -5टुक्रा;
• सुन मोती -4टुक्रा;
• बुनाई लागि सजिला बोर्ड।
विशेषज्ञहरु बुनाई गर्न कंगन विश्वास , तिनीहरूको हातमा "Shambhala" तपाईं बुनाई लागि विशेष बोर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बोर्ड उत्पादन धन्यवाद चिल्लो र थप सुन्दर प्राप्त छ। यो बुनाइ लागि एक विशेषता स्टोरमा खरिद वा आफ्नो बनाउन सकिन्छ। तपाईंलाई आवश्यक सामान्य काठ काटन बोर्ड, दुई नङ। नङ अलग बीस-पाँच सेन्टिमिटर को एक दूरी मा दुवै पक्षले बोर्ड ड्राइभबाट गर्न आवश्यक छ। को कंगन को मुख्य लाइन नङ बीच झिकेर गरिनेछ।
गाँठे बुनाई को प्रविधी कसरी मास्टर
तपाईं आफ्नो हातमा एक कंगन "Shambhala" प्रदर्शन अघि, गाँठे बुनाई बुनाई को प्रविधी मास्टर गर्न आवश्यक हुन्छ। का चरणमा यो प्रविधी हेरौं:
पहिलो, तपाईंले एक बोर्ड र्याप waxed कर्ड मा एक नङ आवश्यक छ। बलियो गाँठ बाँध र गाँठे बुनाई बुनाई गर्न थाल्छन्।
अर्को, तपाईं दोश्रो नङ गर्न कर्ड सुत्छन् गर्न आवश्यक छ। यो यसरी पाँच सेन्टिमिटर को एक पुच्छर छोडेर कैंची संग कर्ड कटौती बाँकी छ। अझै तपाईं स्वाद छ कि क्रममा मोती stringing निश्चित जो छैन, कर्ड, को दोस्रो अन्त मा। हाम्रो मामला मा, हामी धातु, पारदर्शी र सुन मोती वैकल्पिक। यस खण्डका रूपमा प्रक्रिया सकेसम्म धेरै र बलियो गाँठो बांधन कर्ड पछि।
तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने "एक कंगन कसरी बनाउने Shambala", यो लेखमा, तपाईं जवाफ पाउनुहुन्छ छ। गाँठे बुनाई बुनाई को प्रविधी मा हामी अब सार्न। लामो कर्ड कर्ड सबै मूल कुराहरू र एक ठोस गाँठ बांधन लट छ संग पहिलो नङ देखि दुई सेन्टिमिटर प्रस्थान। दुवै पक्षले गर्दा बराबर लम्बाइ दुई खण्डहरूमा छोडेर।
तपाईं गाँठे बुनाई को प्रविधी मास्टर गर्न सक्छन् भने कंगन आफ्नै हातले "Shambhala", एकदम सरल बुनाई गर्न। हामी लामो कर्ड बायाँ भाग braiding थाल्छन्। सही खण्ड मा मुद्दा कारखाना अन्तर्गत आफ्नो जग पछि, बायाँ खण्ड को अन्त लिन र।
अर्को, तपाईं सही स्ट्रिङ लिनु आवश्यक र बायाँ कब्जा अन्तर्गत यो पकड। हामी मुद्दा कस र हामी पहिलो गाँठे बुनाई गाँठ प्राप्त देख्न सक्नुहुन्छ।
एकांतर प्रत्येक मनका लागि नोड्स गर्न र सम्पूर्ण चित्र इकट्ठा। सामेल हुँदै पारंपरिक कंगन नोड्स द्वारा हुन सक्छ। लम्बाइ, तपाईं आफ्नो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो कंगन गरे आफ्नै हातले "Shambhala" छन्।
को बुनाई मा धेरै घन्टा हुनेछ, तर अन्त मा तपाईं काम मा र बिदा समयमा दुवै थकित गर्न सकिन्छ कि एक अद्वितीय र मूल आभूषण प्राप्त। एक किफायती मूल्य मा सबै आवश्यक सामान बुनाइ को दोकान मा उपलब्ध छ। तपाईं मात्र पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि काम गरेको आनन्द। "Shambala" कंगन आफ्नै हातले गर्न आधुनिक Fashionista लागि वास्तविक Boon छ। शुभकामना छ!
ढाँचा लामो पोशाक। आफ्नै हातले लामो पोशाक सिलाई
एक कोट हुक कसरी बुनना र गल्ती नगर्न
आफ्नो हातले हजुरआमा जन्मदिन Hack। पोस्टकार्ड हजुरआमा जन्मदिन
रूसी लोकगीत चित्र कोर्ने लागि ढाँचाहरू
महान् सिल्क रोड - प्राचीन व्यापार मार्ग
Boogie - नृत्य को दुनिया को भाग
Avdeev व्लादिमीर - जीवनी र काम
विरंजन गुदा - newfangled प्रक्रिया
बोन सूप। सन्दर्भहरू केवल सकारात्मक
तयारी र डिकोड: को लागि कोलेस्ट्रल रगत कसरी दान गर्न
आफ्नो व्यवहार अविवेकी छ? यो निश्चित गर्न सकिन्छ!
Brizhit Bardo: जीवनी, Filmography र अभिनेत्री व्यक्तिगत जीवन
ल्वाड़ रूख: विवरण, फोटो, वितरण, गुण
घरमा पानी मैनीक्योर कसरी बनाउने: चरण निर्देशनहरूको र रोचक विचार गरेर चरण